Mahdi M. Guuleed oo xil ka qaadis ku sameeyay Xoghayaha…
Sii hayaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo maanta oo kale todobaad hore Hogamiyaha DFS Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo u magacaabay xilkaas kadib markii Mooshin aan horay loosoo shaacin kalsoonida Golaha Shacabka kala laabteen Xasan Cali Khayre ayaa joogteeyay isbadalka uu sameynayo.
Guuleedd ayaa xilka ka qaaday Cabdirisaaq Xuseen Aadan (Cabdirisaaq Caato) oo 28-kii Bishii tagtay uu u magacaabay in si KMG ah u noqdo Xoghayaha joogtada ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Dalka.
Booskaan waxa uu sidoo kale si KMG ah ugu magacaabay Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim, waxaana taasi ay keentay jaho-wareer siyaasadeed oo ka dhashay badalka iyo magacaabista joogtada ah.
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka ma uusan shaacin sababta keentay in Cabdirisaaq Caato laga wareejiyo xilka si KMG ah uu u hayay wax ka yar Todobaad, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in latashiyo kala duwan ay socdeen.
Xilkaan Qofka haya ayaa muhiim u ah howlaha Xukuumadda, dhaq-dhaqaaqyada dhammaan shaqooyinka ka socda, waana tan keentay in kulamada lagu dabagalayo booskaan joogto noqoto.
Sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar) Sii hayaha Ra’iisul Wasaara Dalka ayaa joogteeyay kormeerka qaar kamid ah Wasaaradaha Xukuumadda ee Sida KMG ah ah usii shaqeynaya, waxaana goobaha ugu badan uu tagay kamid ah ilaha dhaqaalaha dalka, Wasaaradda Maaliyadda, Bangiga dhexe iyo meelo kale.